ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : တနသာင်္ရီတိုင်း၊ မြိတ်မြို.သို. ၈၈ မျိုးဆက်များသွားရောက်
တနသာင်္ရီတိုင်း၊ မြိတ်မြို.သို. ၈၈ မျိုးဆက်များသွားရောက်